ARRABA HANGA SABBATA MAANQUX DHEERATU NURRAA SASSAABBADHAA!! – Beekan Guluma Erena
ARRABA HANGA SABBATA MAANQUX DHEERATU NURRAA SASSAABBADHAA!!	Beekan Erena
Education November 30, 2016
40SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
ARRABA HANGA SABBATA MAANQUX DHEERATU NURRAA SASSAABBADHAA!!
Namoonni gariin waan sababa hin taane sababsattanii jeequmsaafi qababsaa gatii hin qabneen, fannaafata humaa nuuf hin gooneen jeequmsa addaa uumaa jirtan adaba nurraa godhaa. Adabachuu baattaniis boru sheenaafi seenaan isin adabuu waan hin oolleef rakkoon qabu. Garuu lapheefi sammuun keessan osoo dhugaa beekuu arrabni keessan maaliif cubbuu taraara? Takka waan walitti hin malle waliin madaaltan. Yeroo biraa immoo fiddanii waan walitti hin dhiyaanne walitti harkiftan. Takka deebitanii waan wal hin fakkaanne walitti erbitan. Hanga adeemsa qabsoo Oromoo walitti dhuubdanii ganaantan kana maaliif waanuma dandeessaniifi karuma isinitti toleen qabsoo Oromoo itti hin fufne? Olola dharaafi odeeffannoo bu’ura hin qabneen ilmaan Oromoo wal shakkisiisuuf wixxifachuu irra yoo dandeessan roguma isiniif mijjaa’uun wayyaanee irratti waa darbuufi geengoo diinaa diiguuf xiyyeeffachuu yaalaa mee. Isin qabsoo Oromoo irratti fufaa darbaa ooltaniis, hogoggorsaa keessa harkiftaniis qubaa caphxan malee qabsoo dhaloota qubee doomsuufi qammansuu akka hin dandeenye baraa.
Oromoon garuu kan shira xaxuufi kan cubbuu gaaxu addaan bartee jirti waan taheef dhoksaaniin qabsoo qancarsa jettee of hin dararin. Kaayyoofi aayyoon Oromoo takkuma. Warreen miira fedhii keessoo isaanii qofarratti rarra’uun akka waan kaayyoon addaatti Oromoo walitti buusuuf yaalaa jirtan isinumaatu qilee gandummaa qotatte keessa bu’ee caccapha malee Oromoon walitti buutu hin jirtu. Kaleessa gaafa Oromoon adeemsaafi sirna qabsoo hin hubatin tarsiimoo itti milkooyte arrallee naaf milkaawa jettee yoo anfariiraa jiraatte sitti bariitee jirti. Oromoon yaadaafi malaaniis bakkaafi akka kaleessaa jirti jettee yoo yaadde sammuun kee akka hamatti kantartee, sochii dhaabdee jiraachuu kee namaaf mirkaneessa. Rakkoo dhunfaan qabdu adeemsa qabsoo keessa yoo fiddu immoo sababaaf namoota biraa afaanitti qabattee osoo hin taane sumaafi rakkoon kee qofti waliin koottaa. Qabsoon tun osuma kaan caranuu, kaaniis dutuu imala itti fuftee as geesse. Ammaas osuma isin halaaktaniifi mar’attanii galma barbaadamu san akka geessu hin shakkinaa.
Dhaamsa gabaabaan yoon ibsu, kan Oromoo wal afaan fiduu yaaluufi kan roguma fedheen qabsoo danquuf dhimma gandummaa, ilaalchaa siyaasaa, amantaafi kulaa kulbus biraatiin afaan mimmi’eeffatee as bahu kamuu ergamaa diinaa tahuu isaa eenyulleen ifatti haa baru. Atiis diinummaa kee ofitti mirkaneessaa jiraachuu kee, ofii keetiif ragaa ofitti baatee of saaxilaa jiraachuu kee of bari. Namuu kaayyoofi akeeka jaarmayni inni deeggaru qabu bu’ureeffatee diinarratti waan danda’u darbachuun ala, kara barbaadeefi isaa toluun qabsoo nyaapha kuffisuuf godhaa jiru tirachiisuu malee dhaabaas tahee garee qabsoo Oromootiin godha jedhee of labse kamuu irratti as deebi’ee ololaafi jibba hafarsee taanaan Oromoon eenyummaa isaanii beekuu qaban. Ni beekaniisi. Kanaafuu naguma of shukkuumuufi of tuuluun yeroo of jalaa hin gubinaa jennaan. Qabsoon teessan diina keenya isa gamtaan qabnu irratti haa tahuu. Kana dhabdan immoo nurraa cal’isaa. Qabsoo oofuu yoo dadhabdaniis galaa diriirfadhaa malee arraba keessan kan hanga sabbata maanqux dheeratu kana nutti dheereessuu irraa of qusadhaa.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa40SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← AFAAN OROMOO.-Yaadannoowwan dhiibbaa darbaniifi ejjennoo fuulduree keenyaa!! –
Professor Marara Guddinaa dura taa’aan OFC Mootummaa Wayyaaneen Ukkaamfaman!Marara Guddinaa eenyudha? →